DepositPhotos: Sary stock tsy misy Royalty mora azo jerena amin'ny fijerena sary miverina! | Martech Zone
Mampiasa taonina izahay sary tahiry tsy misy mpanjaka. Avy amin'ny tranokalanay, lahatsoratra bilaogy, whitepapers, ary koa ny atiny rehetra novokarinay ho an'ny mpanjifa, an-jatony dolara isam-bolana ny faktioran-tsarinay. Toa vantany vao nofenoiko ny kaonty dia foana foana ao anatin'ny herinandro na roa. Nandoa vidiny lafo be izahay tamin'ny tranokala sary malaza.
Inona no atao hoe Royalty-Free
Ny sary tsy misy Royalty, na ny sary RF, dia mamela ny fampiasana sary voafetra tsy mila mandoa isaky ny fampiasana. Ohatra, raha mividy sary tsy andoavam-bola ho an'ny tranonkalantsika isika dia afaka mampiasa azy io hatrany hatrany amin'ny tranokalanay sy amin'ny antoka (miankina amin'ny mpivarotra). Na izany aza, tsy afaka mivarotra na mampiasa azy ho an'ny mpanjifanay izahay. Ary raha ampiasaintsika ho an'ny mpanjifantsika izany dia tsy azontsika ampiasaina amin'ny fiantohana manokana ihany koa izany. Mitandrema tsara amin'ny famakiana ny printy tsara amin'ny fampiasana! Ny sasany dia natao manokana ho an'ny fampiasana tsy ara-barotra, ny hafa mety misy fotoana na isan'ny fampiasana voafetra.
Raha manitsakitsaka ny fepetran'ny fampiasana amin'ireo sarinao tsy andoavam-bola ianao dia mety hokasihin'ny taratasy avy amin'ny tompona ny zony. Matetika izy ireo dia maniry dolara an-jatony na an'arivony ho valin'ny fanararaotana diso… ary mandrahona hetsika ara-dalàna raha tsy mankatò ianao. Ny ankamaroan'ny olona dia mianatra ny lesona ianarany fotsiny, mandoa ny faktiora ary mandroso.
Ohatrinona ny vidin'ny sary tahiry tsy misy Royalty?
Betsaka ny fandaniana amin'ny sarin-tahiry ary ny ankamaroan'ny sehatra dia miasa amin'ny rafitra teboka. Tena mila mandika ny bola amin'ny dolara ianao. Ny sasany dia denaria vitsivitsy, arakaraka ny haben'ny sary… ny hafa mety ho dolara maromaro isaky ny sary. Ary ny hafa kosa dia vidiny isaky ny sary isaky ny ampiasaina!
Tsy nampaninona anay ny nandoa vola be toy ny nataonay satria fantatray fa tena sarimihetsika ny zava-drehetra ataontsika. Ny olona dia manao ambanin-javatra fatratra ny fiantraikan'ny sary tsara tarehy amin'ny hafatra ezahiny hampitaina. Ary ireo olona mampiasa ny Google Image Search ary miankina amin'ny fikarohana tsy misy mpanjaka no mangataka olana! Imbetsaka ny sary no ampiasaina amin'ny fomba ratsy ary hitan'ny Fikarohana Google Image izany avy amin'ny tranokala diso, mampiseho fa tsy andoavam-bola izy io raha tsy izany.
Marina izany… Sarobidy an'arivony ny sary
Miaina anaty tontolon'ny fahitana isika. Ka raha vonona handoa dolara an-jatony ho an'ny atiny ianao, dia tsy misy dikany ny fampiasam-bola amin'ny endrika tsara tarehy! Ary ny DepositPhotos dia nanampy fitaovana Reverse Image ho an'ny fangaron'izy ireo! Ankoatra ny sary dia manome ihany koa izy ireo:
Sary Vector - Manomboha loha amin'ny famolavolana rindrambaiko fotsy na infografika miaraka amin'ireo setana sary miavaka sy ireo hafa sary vector.
fanoharana - Tsy mila ny vector? Sintomy fotsiny ny fanoharana tsy misy mpanjaka ilainao.
Videos - Te hampiditra horonantsary tahiry ho ambadika ny tranokalanao na horonan-tsary stock ho an'ny fangaro video manaraka anao? Manana safidy tsara izy ireo.
Sary fanonta - Mitady sary sasantsasany amin'ny fampiasana tsy ara-barotra? Izy ireo dia manana safidin'ny marika sy olo-malaza tsara azo ampiasaina amin'ny atiny fanonta.
Music - Mila mozika vitsivitsy ve ianao ho an'ny podcast na video intro ary outro? Manana safidy tsara koa izy ireo!
Raha tsy tamin'ny ekipa tao Depositphotos nifandray tamiko momba ny bilaoginay sy ny fampiasantsika sary stock izay tsapako fa nandany vola be lavitra noho izay azonay natao. Depositphotos no mpanohana anay ankehitriny ary mamatsy ny sarin-tsarinay Martech Zone ary koa ireo orinasako hafa. Na dia fifanarahana tsy mampino ho anay aza izany dia mahagaga ihany koa ny vidiny ho anao!
Ho an'ny $ 29 isam-bolana ambany dia azonao ampiasaina hatramin'ny 30 sary tahiry tsy misy mpanjaka isam-bolana avy amin'ny Depositphotos! Vidiny tsy mampino izany ary tsara ho an'ny orinasa antonony mamokatra lahatsoratra amin'ny bilaogy, whitepapers, fandinihana tranga, fiantsoana andraikitra, volavolan-tranonkala ary pejy fitetezana! Manampia sary stock tsy misy mpanjaka amin'ny hafatrao dia ho hitanao ny hatsaran'ny vokatrao!
Midira ho an'ny Depositphotos
Fampahafantarana: Mampiasa ny affiliate link ho an'ny DepositPhotos amin'ity lahatsoratra ity!
Tags: depositphotosmitadiava sary an-tseraserafikarohana sary googlesary miverinafijerena sary miverinarftsy andrianasary tahiry tsy misy mpanjakaMpanohanasary stock